"Godnota" - इन्टरनेटमा को पुस्ता। यो शब्द के हो?
आक्रामक प्रगतिशील युवा मान्छे पक्कै शब्द "godnota" थाहा छ। यो के हो तिनीहरूले व्याख्या गर्न आवश्यक छैन। तर पुरानो मान्छे स्पष्टीकरण को आवश्यकता हो। यसको तागत र कमजोरीहरूलाई बारेमा अन्दाज लगाउनु गर्न शब्द को अर्थ विचार, साथै।
अर्थ, तपाईं ठीक थाहा छैन पनि भने, बुझे गर्न सकिन्छ। Vogue शब्द शब्द "पारित", "उपयुक्त", "उपयुक्ततामाथि" एक मूल छ। यो स्पष्ट हुन्छ एक पटक यस्तो मूल्यांकन सकारात्मक छ भनेर। यसलाई "जीवन", माथि उल्लिखित को संज्ञा, यो एक अनुमान रूपमा चाहनुहुन्छ कस्तो छैन भन्न गाह्रो छ, तर यो छडी थिएन ... लोकप्रिय अवधारणा नेटवर्क मा अझै पनि छ र मात्र एक "godnota" (यो के हो, हामी सिर्फ जाँच्न) ।
यसो परिभाषा छोटकरीमा, निम्नानुसार जारी गरिनेछ: "। Godnota - तपाईं के चाहनुहुन्छ, जो मानिसहरूलाई सकारात्मक-लक्ष्य कुरा मूल्याङ्कन एक शब्द,"
अवधारणा को vagueness: बल र शब्द को कमजोरी
परिभाषा द्वारा, यो एक एकदम unspecific को अवधारणा, र भावना सही कुरा स्पष्ट छ। अन्तर्गत मूल्याङ्कन "godnota" कमजोर रूपमा, बल्लतल्ल सजिलै देखिने स्नेह र आनन्द को एक बौछार पर्छ। मनमा वहाँ आउँछ एक मनोवैज्ञानिक विवरण छ: एक मानिस उहाँले बुझ्न र व्यक्त गर्न सक्छन् मात्र कार्य। "फाइभ्स", "चौका", "तीन" मान्छे दर्जा मात्रा रद्द गरेको कल्पना गर्नुहोस्, कुनै थप। त्यहाँ मात्र हो "पारित" वा "पारित गर्न"। संसारको यो सिद्धान्त अनुसार बाँच्न छ भने, व्यक्ति चाँडै संसारको दृश्य धारणा को deprived हुनेछ, उहाँले मात्र "हो वा कुनै" को कोटीमा लाग्छ हुनेछ। शायद, निश्चय लागि यो खराब छ, तर रंग नष्ट हुनेछन्।
र godnotoy संग कुरा (यो के हो, हामी पहिले नै थाहा) छोटो र भावना को एक ठूलो राशि, नियम रूपमा, जटिल, प्रसारित डाटा शब्द सकारात्मक पक्षहरू छन्। उदाहरणका लागि, यो अनुमान तपाईंलाई छिटो र बिन्दु कुरा गर्न आवश्यक जब समय बचत हुनेछ। तर यस्तो शब्द बानी बोली र छरितो मान्छे संग अभिव्यक्ति भाषा हत्या।
किन यो अवधि प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ "godnota" र कसरी यो के गर्ने?
हामी अघिल्लो तर्क संग जडान गुमाए छैन। को पाठ्यक्रम, तपाईं बस बाहिर जीवन र भाषामा नयाँ रुझान शायद छैन सबै त आधुनिक तरिकाले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, तर? सबै गति र दक्षता सराहना माथि छ, तर जब यो त हतार कि, मानव अन्तरक्रिया गर्न आउँछ? यसलाई अझ बढी र थप गहिरो आफ्नो विचार व्यक्त गर्न राम्रो हुन सक्छ?
तर के को परिभाषा बदल्न "godnota" (मतलब के हामी पहिले नै थाह थियो)? एनालग एकदम सरल फेला - व्यक्तिगत रचनात्मकता। एक मानिस एक चलचित्र वा पुस्तक पढेर देख्नुहुन्छ, र उहाँले सोच्छ के आग्रह थियो। उहाँले बरु monosyllabic जवाफ कला काम को फाइदा र बेफाइदा बारेमा लामो खण्डमा composes। हो, यो धेरै गाह्रो छ, एक बानी आवश्यक छ। तर कुनै शङ्का मा पाठक यसलाई भविष्यमा राम्रो stead मा उहाँको सेवा गर्नेछ गरौं। अर्डर इन्टरनेट cliches विचार गर्न मा, विश्लेषण गर्न बाहिर संसारमा आफ्नो मनोवृत्ति महसुस गर्न, र त्यसपछि स्कोर "godnota" (यो के हो, हामी लेखमा खुलेको) अब जस्तो हुनेछ ठूलो पढ्ने रूसी क्लासिक हुनुपर्छ र विचार-सोच्नुहोस्-विचार, लगभग कुनै पनि अवस्थामा उपयुक्त।
जनसंख्या र समारा को क्षेत्र। शहर को इतिहास
Transversus abdominis र अन्य पेट मांसपेशीमा
को यूराल हिमालहरूको उच्चतम पहाड। को यूराल हिमालहरूको भौगोलिक स्थिति। को यूराल हिमालहरूको उच्चतम शिखर
युरोप मा, कार द्वारा। युरोप स्वतन्त्र यात्रा। कार द्वारा यात्रा
चेस खेलाडी Gata Kamsky: जीवनी, पेसा
तपाईं बन्दागोभी तल्लो पात तोड्ने चाहिएमा हामीलाई थाहा दिनुहोस्?
"Pripyat को कल" Stalker गर्न उपकरण कहाँ फेला पार्न? निर्देशन र सुझाव
जीवनी Denisa Rozhkova, फिलिम र थिएटर अभिनेता
तिनीहरूले सेट रूपमा दिन, "YouTube" मा "रुचि" र किन